गलबन्दी विवाद सुल्झियो, संगीतकारका रुपमा शम्भु राईको नाम राख्ने सहमति !
प्रकाशित मिति : June 27, 2019
काठमाडौं : गलबन्दी विवाद सुल्झिएको छ। दुबैपक्षले बुधबार एक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै विवाद टुंग्याएका हुन्। गलबन्दी गीतमा संगीतकारका रुपमा शम्भु राईको नाम राख्ने सहमति भएको छ। सहमति अनुसार प्रकाश सपुतको नाम पनि संगीतकारकै रुपमा रहनेछ। सपुतको ‘गलबन्दी च्यातियो’बोलको गीत सार्वजनिक भए लगत्तै राईको ‘आऊ नाचौं साथी हो’ बोलको देउसीभैलो गीतसँग मिलेको भन्दै यसबारे विवाद सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चार्चा हुन थालेको थियो।
पछि राईले पनि आफ्नो गीतको लय चोरी भएको बताएका थिए । अर्कोतर्फ सपुत राईको देउसीभैलो गीत कहिल्यै नसुनेको दाबी गर्दै आएका थिए। यद्यपि मंगलबार दुई पक्षबीच सहमति भएको हो।
गलबन्दी बिबाद बारे प्रकाश सपुतले शम्भु राईलाई लेखेको पत्र !
म ठिक ठाक छु सर । हामीलाई हाम्रो समयले दिएको एउटा जादुमयि अवसर छ – भाईरल । छिनमै उचालिएर माथी पुग्ने, छिनमै तल थेचारिने । त्यसैले लगभग सामान्य जस्तै लाग्न थालेको छ रातारात चर्चित हुने र रातारात गाली खादै लखेटिने प्रवृदि । जुन भोक थियो नि सर चिनिने/ चर्चित हुने । भयो, अघाईयो । भुडि फुट्ने गरि अघाईयो । अं साच्चि भाका मिलेको प्रंसग । गाउमै हुदा सुनेको भनेर तपाईलाई मख्ख पार्दिन सर । काठमाण्डौ आएर दोहोरी साझमा काम गर्न थाले पछि हजुरका धेरै गितहरु सहकर्मिहरुको आवाजमा सुनियो । आफुलाई रहर लागेर खोजी खोजी ओरिजिनल गित सुनेर डायरिमा गित टिपेर पनि गाईयो ।
नेपाली मौलिक कला संस्कृतिको बिछट्टै माया रैछ सर । त्यति माया गर्ने मान्छेले एउटा अनुज भाईले अहिलेको समयमा मौलिकता झल्काउन गरेको प्रयासलाई अलिकति भाकाको प्रसंग लिएर निरुत्साहित नगरिस्योन । हजारौ प्रकाश सपुत आए पनि तपाईको ईतिहास र अस्तित्व मेटिन्न सर । ल मानम कसैले अझै मिठो गरि चिठि तिम्लाई दुरुस्त निकालेछ भनेपछि तपाई मेटिनुहुन्न सर । तपाईको अस्तित्व आउछ आउछ । लेख्दा लेख्दै मोबाईलको व्याट्रि २ प्रेसेन्ट भएछ । समय बिहानको ४:३४ ! र अन्त्यमा, तपाईले बोलाएका फोरमहरुमा म उपस्थित हुन तयार छु सर, छलफल का लागि बहसका लागि, संगितको शुद्दिकरणका लागि, कपराईटको कानुन कार्यान्वयनका लागि र अग्रजहरुको सम्मान का लागि ।